हान्ता भाइरसः के हो लक्षण, कसरी गर्छ संक्रमित ? | Ratopati
हान्ता भाइरसः के हो लक्षण, कसरी गर्छ संक्रमित ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeचैत ११, २०७६ chat_bubble_outline0
संसारभरी कोरोना भाइरसको त्रासबीच हान्ता भाइरसले मानिसहरुको चिन्ता बढाएको छ ।
चीनमा हान्ता भाइरसका कारण २३ मार्चमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको खबर छ ।
ग्लोबल टाइम्सको खबर अनुसार हान्ता भाइरस संक्रमित व्यक्ति जुन बसमा सवार थिए, त्यहाँ सवार ३२ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।
यो खबर सार्वजनिक हुने बित्तिकै ट्वीटरमा हान्ता भाइरस शीर्ष स्थानमा ट्रेन्ड गर्न थाल्यो ।
तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आखिर हान्ता भाइरस कसरी फैलिन्छ भन्ने हो ।
हान्ता भाइरसको लक्षणः
सीडीसीको रिपोर्ट अनुसार हान्ता भाइरस मुसाबाट फैलन्छ ।
यदि कोही व्यक्तिले मुसाको मल–मूत्र वा -याल छोएपछि हातले अनुहारलाई छुन्छ भने संक्रमित हुने आशंका बढ्छ ।
यद्यपि, साधारणतया हान्ता भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन । हान्ताको संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन एकदेखि आठ हप्ताको समय लाग्नसक्छ ।
यदि कोही व्यक्ति हान्ता भाइरसद्वारा संक्रमित छ भने उसलाई ज्वरो, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, बान्ता हुनेलगायतका समस्या देखिन सक्छ ।
हान्ता संक्रमित व्यक्तिको स्वास्थ्य बिग्रँदा फोक्सोमा पानी भरिन थाल्छ र सास फेर्न समस्या पनि हुनसक्छ ।
जनवरी सन् २०१९ मा पेटागोनियामा हान्ताको संक्रमणले ९ जनाको ज्यान लिएको थियो । त्यसपछि पर्यटकलाई पनि यसबारे चेतावनी दिइएको थियो ।
त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म हान्ता भाइरसका ६० संक्रमित भेटिएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये ५० जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
सीडीसीलाई विश्वास गर्ने हो भने हान्ता भाइरसमा ३८ प्रतिशत मृत्युदर हुन्छ र यो रोगको कुनै निश्चित उपचार पनि छैन ।
नेपाल–भारत सीमामा अलपत्र नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन माग गर्दै रिट